आयुर्वेदिक महत्वको गौमूत्र : वैज्ञानिक दृष्टिमा के–के छन् फाइदा ? – साँचो खबर
डा. हेमराज कोइराला, हिन्दू धर्ममा गाईलाई आमा मानिएको छ । संसारको सबैभन्दा प्राचीन धर्मले एउटा सामान्य पशुलाई आमाको स्थान दिनु र यसको मल एवं मूत्रलाई परमपवित्र मान्नु सामान्य नभएर विशेष रहस्यको विषय हो । अझ आयुर्वेदमा त गौमूत्रलाई अति महत्वपूर्ण औषधिको रूपमा प्रयोग गर्ने गरिन्छ ।
Previous: खुल्न थाले विद्यालय, यसरी पढाइँदैछ विद्यार्थी
Next: सडक आन्दोलनसँग मेरो साइनो छैन : पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह